‘Waxaa la i kufsaday anigoo 14 jir ah - muuqaal la iga duubay ayaana dhex wareegayay internet-ka’ - BBC News Somali
‘Waxaa la i kufsaday anigoo 14 jir ah - muuqaal la iga duubay ayaana dhex wareegayay internet-ka’
10 Febraayo 2020
Lahaanshaha sawirka Rose Kalemba
Sanadkii lasoo dhaafay Rose Kalemba waxay baraha bulshada kusoo qortay sharraxaad ay ka bixineysay arrin xanuun badan oo ku dhacday - taasoo ah in iyadoo 14 jir ah la kufsaday - ka diibna ay dhibaato badan u martay in muuqaal laga duubay falkaas laga saaro bog caan ah oo lagu daawado filimada galmada ah. Tobannaan qof ayaa markaas lasoo xiriiray iyagoo u sheegayay inay dhibaatadaasoo kale qabeen islaa maanta.
Markii la kufsaday kaddib, haweeeney kalkaaliso ah ayaa soo istaagtay albaabka laga galayay qolka ay isbitaalka uga jirtay Rose waxayna soo eegtay wajigeeda.
"Waan ka xumahay waxa kugu dhacay," ayey ku tiri, iyadoo codkeeda uu gargariir ku jiro. "Gabadheyda xitaa waa lasoo kufsaday".
Rose waxay eegtay kalkaalisadii. Da'deedu kama aysan weyneyn 40 sano, sida ay u maleyneysay Rose, waxayna dareentay in gabadheedu ay u yareyd sideeda oo kale.
Dib waxay uga fakartay habeenkii falka loo geystay, qof walba oo ay dhacdadaas uga warrameysayna ma uusan rumeysaneynin xaqiiqda dhabta ah ee ay sheegeysay.
Xitaa waxaa si aan qiiro lahayn u dhageysanayay askari boolis ah, aabaheed iyo ayeydeed, kulligoodna waxay adeegsanayeen erayga "eedeyn".
Hase yeeshee kalkaalisada sidaas way uga duwaneyd xaaladda.
"Way i rumeysatay", ayey tiri Rose.
Rajo yar ayaa gashay - sababtoo ah waxay heshay qof aqoonsaday waxa ku dhacay, dareen xanuun lehna u muujiyay. aad bay u nafistay, waxayna dareentay inay billowday kasoo kabashada dhibaatadii gaartay.
Laakiin wax yar kaddib, boqollaal kun oo qof ayaa falkii lagu sameeyay ka daawaday internet-ka, wax naxariis ahna dabcan uma aysan muujineynin dhammaantood.
'Wadaadkii aan dawo dhaqameedka ugu tagay ayaa i kufsaday'
Toban sano ka dib, Rose waxay timaheeda madow dhaqaneysay iyadoo adeegsaneysa muraayadda. Laakiin dhowr bilood ka dib markii la kufsaday sidaas ma dhici karin, waayo dhammaan muraayada gurigeeda waxay ku dabooshay busteyaal, sababtoo ah uma aysan dulqaadan karin inay wajigeeda eegto wixii ku dhacay awgiis.
Hadda waa 25 sano jir waxayna si iskeed ah u sameysataa waxyaabo ay nafteeda ku qanciso.
Inay timaheeda xannaaneyso waxay ka mid tahay howlahaas. Inay shaleyso waxay ku qaadataa wakhti iyo dadaal badan, waxayna ula mid tahay sidii inay isdaaweneyso. Way ogtahay inay timo qurux badan leedahay, dadkuna mar kasta waxay faallo uga bixiyaan baraha bulshada.
Subax walba waxay gacanteeda ku sameysataa koob shukulaato ah oo ay u aragto inuu daawo u yahay qalbigeeda.
Waxay mar kasta buuggeeda xusuus qorka ku qorataa guulaha ay jeceshahay inay mustaqbalkeeda gaarto.
Su ulakac ah ayey ugu qortaa sidii inay yihiin wax ay heshay oo kale.
"Waxaan ahay darawalad ku fiican sida loo kaxeeyo gawaarida", waa hal yool oo ay ku hammineyso. "Waxaan si farxad leh isku guursannay Robert", waa yoo, kale. "Waxaan ahay hooyo wanaagsan", kaasna waa mid kale.
Maadaama ay ku kortay magaalo yar oo ku taalla gobolka Ohio, mareykanka, wax caadi ah ayey u ahayd Rose inay socod lugo baxsi ah soo sameyso ka hor inta aysan seexanin. Madaxeeda ayey ku nadiifin jirtay socodkaas gaaban, waxayna ku istareexi jirtay hawada dabiiciga ah ee ay bannaanka kusoo qaadato.
Sidaas awgeed maqribnimadii xagaaga ee sanadkii 2009-kii, isla habeennadii hore ayey yla mid ahayd Rose oo markaas 14 jir ahayd
Image caption Rose oo iyadoo yar ku ciyaareysa qalabka carruurta iyo buugaag
Laakiin wax yar kaddib nin ayaa ugasoo baxay dhinaca mugdiga, wuxuuna khasab ku saaray gaari. Nin kale ayaa gaariga sii saarnaa, kaasoo da'diisa ay ahayd qiyaastii 19 - horayna waxay ugu arki jirtay magaalada.
Waxay u kaxeysteen guri ku yaallay dhinaca kale ee magaalada, waxayna kufsanayeen muddo 12 saacadood ah, halka nin saddexaadna uu muuqaal ka duubayay qeybo ka mid ah weerarka kufsiga ah.
Rose way argagaxday - neefsashaduna way ku adkeyd. Si xun ayaa loo garaacay waxaana toorri looga dhuftay lugta bidix, dharkeedana waxaa buux dhaafiyay dhiig. Way dhacday wayna miyir daboolantay.
Xitaa mar, mid ka mid ah raggii kufsanayay wuxuu laptop-kiisa ka tusay muuqaallo laga sameeyay weerarro noocaas ah oo ay u geysteen haween kale.
"Labada ninba waxay ahaayeen caddaan, qaar ka mid ah dhibaneyaashuna waxay ahaayeen caddaan laakiin waxay u badnaayeen haween midab kale leh oo aan caddaan ahayn", ayey tiri Rose.
Markii dambe raggii waxay ugu hanjabeen inay dili doonaan. Waxay ka codsatay inay sii daayaan, iyadoo u ballanqaadday inaysan aqoonsidooga fashili doonin, waligeedna cidna u sheegi doonin.
Gaarigii ayey kusoo qaadeen, waxayna ku tuureen meel qiyaastii saacad barkeed looga lugeyn karo guriga qoyskeeda.
Image caption Rose Kalemba oo yar iyo aabaheed
Markii ay guriga soo gaartay waxay muraayadda ku aragtay dhaawacyo wajigeeda ku yaallay.
Aabaheed, oo lagu magacaabo Ron, iyo qaar kale oo ka mid ah xubnaha kore ee qoyskeeda ayaa ku jiray qolka fadhiga, waxayna isku diyaarinayeen inay qadeeyaan.
Iyadoo dhaawicii loo geystay uu wali ka dhiigayo ayey u sharraxday wixii ku dhacay.
"Aabahay wuxuu wacay booliska, islamarkiiba wuu ii walwalay, laakiin dadkii kale waxay igu eedeen inaan dalbaday socod habeennimo ah", ayey tiri Rose.
Markii isbitaalka la geeyay, Rose waxaa salaamay dhakhtar nin ah iyo askari boolis ah.
"Waxay iila dhaqmeen si aysan wax naxariis ah iigu muujineynin, oo la mid ah sidii kiis caadi ah", ayey tiri.
Ninkii askariga ahaa wuxuu ku billaabay wareysi, isagoo weydiinaya in dhalinyaro ay habeennimo la joogtay ay ku xadgudbeen.
Rose way sii argagaxday, waxayna u sharraxday sida ay wax ku dhaceen.
Markii isbitaalka laga saaray maalintii xigtay, waxay isku dayday inay isdisho, iyadoo ka yaxyaxeysa qaabkii ay kusii noolaan lahayd, laakiin walaalkeed ayaa xilli fiican kasoo gaaray.
Way iska caddeyn in Ron Kalemba uu wax badan ka walbahaaray arrintii ku dhacday gabadhiisa. Wuxuu isweydiin jiray waxa uu ka qaban karo.
Image caption Ron Kalemba, Rose aabaheed
Gabadhiisii dabeecadaheedii oo dhan way isbaddaleen falkii loo geystay kaddib.
Xitaa Iskuulka si toos ah uma aysan dhigan jirin, halkii ay markii hore ka ahaan jirtay ardayad waddada toosan ku taagan, fasalkeedana ku dadaasha.
"Waxay u muuqatay in dunidoo dhan ay ciriiri ku noqotay", ayuu yiri.
Dhowr bilood ka dib, Rose waxay baraha xiriirka bulshada ku aragtay lifaaq ay lasoo wadaagayeen dad badan oo ay iskuulka isla dhigan jireen. Markii ay sii gujisayna waxay aragtay muuqaalladii kufsigeeda laga duubay oo ku dhex jira website caan ah oo laga daawado filimada anshax xumada ah iyo galmada.
Aad bay u argagaxday.
"Mid ka mid ah muuqaalladaas waxaa daawatay in ka badan 400,000 oo ruux", ayey tiri Rose oo dib u xasuusaneysay.
Maalintaas wixii ka dambeeyay waxay billowday inay farriimo baryo ah u dirto maamulka website-ka, iyadoo ka codsaneysa inay muuqaalladeeda ka masaxaan boggooda.
Xaafaddii ay dagganeyd ayuu culeys kale kasoo fuulay.
Dhalinyarada wiilasha ah qaarkood waxay sheegeen inay walaidiintooda uga digeen u dhawaanshaha gabadhaas, maadaama laga yaabo inay shukaansato kaddibna ku eedeyso inay kufsadeen.
"Dadka way u sahlantahay inay dhibbaneyaasha eedeeyaan", ayey tiri.
Muddo dheer markii ay farriimo u direysay bogga internet-ka ee ay muuqaalladii laga diuubay ku jireen, wax jawaab ahna ay ka weysay, way niyad jabtay.
Qof walba oo aysan aqoonin markii ay indhaheeda ku dhacaan waxay isweydiin jirtay inuu muuqaalkeeda daawaday.
Markii dambe waxay heshay fikrad.
Waxay qortay farriin cusub oo email ah, iyadoo iska dhigeysa qareen, waxayna website-kii ugu hanjabtay in tallaabo sharci ah lala tiigsan doono.
248 saacadood gudahood, muuqaalladii oo dhan waa la tirtiray", ayey tiri.
Bilooyin ka dib Rose waxay heshay la talin, waxaana lagu qanciyay inay sheegto aqoonsiga raggii kufsaday, kuwaasoo ay raadintooda isku howleen qolyo booliska la shaqeeya. Laakiin qoyskeeda iyo booliskaba uma aysan sheegin arrinta ku saabsaneyd muuqaallada.